11 Sep 2018 . 6:21 PM
ကံ့ကော်ပန်းတွေပွင့်တဲ့နယ်မြေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်သုပ်စုံလေးတွေနဲ့ ဗမာစာစစ်စစ်ကို သန့်ပြန့်နေအောင်စားရမယ့် ကံ့ကော်ဖြူနယ်မြေလေးဆီ ရောက်ပြီးပြီလား?
“ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက မနက်စာစားတဲ့ဆိုင်လေးတွေရဲ့ အငွေ့အသက်ကို လွမ်းလိုက်တာ…”ဆိုတဲ့သူတွေ၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ငယ်ဘဝလေးတွေကို တမ်းတမိတဲ့သူတွေအတွက် ရန်ကင်းက ဆိုင်သေးသေးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Kant Kaw Phyu Food House လေးကို ဒီတပတ် အခရာက ကံကောင်းထောက်မပြီး ရောက်သွားပလို့ပေါ့။
ကံကောင်းတယ်ဆိုတာက ဒီလို။ ဆိုင်လေးက အိမ်ဆိုင်သေးသေးလေးကိုမှ အမှတ် (၁၂)၊ အဝေရာလမ်း၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်းမှာဆိုတော့ လမ်းထဲတော်တော်ဝင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပြီး သန့်ရှင်းနေတော့ အမောပြေရတယ်။ ခုံမြင့်လေး ၆ခုံလောက်နဲ့ အအေးကောင်တာ၊ အသီးဖျော်ရည်ကောင်တာရယ်၊ မြန်မာမုန့်နဲ့ထမင်းဟင်းကောင်တာရယ် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေး။
ဆိုင်လေးက ဘာတွေရလဲမပြောခင် စိတ်ချမ်းသာစရာလေးပြောပြမယ်။ သူ့ဆိုင်မှာ အချိုမှုန့်လုံးဝမသုံးဘဲ မြေပဲဆီစစ်စစ်နဲ့ သုံးတာတဲ့။ အရမ်းကြွေစရာကောင်းတာက ရေဝယ်သောက်စရာမလိုတာပါပဲ။ သူက Detox Water လေးချပေးတယ်။ Jar လေးနဲ့ အဝသောက်ပဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ Five Star ပေးလိုက်ပြီ။
နန်းကြီးသုပ်၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ မုန့်တီ၊ ခိုတောင်ခေါက်ဆွဲ၊ ကောက်ညင်းပေါင်း၊ ပဲဆီထမင်း၊ အကြော်စုံနဲ့ လက်ဖက်ရည် ဘာညာသောက်စရာက မနက်စာတလိုင်း။
ပြည်ထမင်းသုပ်၊ မြင်းခြံထမင်းသုပ်၊ ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်နဲ့ တခြားအသုပ်တွေ အိမ်ချက်လက်ရာဟင်းတွေနဲ့ အကြော်၊ အမွ၊ ခြောက်စပ်တွေက နေ့လည်စာတစ်သွယ် ရပါတယ်တဲ့ရှင်။
မုန့်ဟင်းခါးလေးက ငါးနံ့လေးသင်းလို့ အချိုမှုန့်မလိုဘဲကို ငါးရဲ့ အချိုဓါတ်လေးနဲ့ ဘဲဥဖတ်လေး၊ ငှက်ပျောအူလေးနဲ့ တစ်ပန်းကန်စီ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေး။ ဗမာမုန့်ဟင်းခါးစစ်စစ် မွှေးနေတာများ စားကောင်းမယ်ဆိုတာ အနံ့နဲ့တင် သိနေရပြီ။ အလွတ်ဆို ၈၀၀ ပါ။
ပြည်ထမင်းသုပ်လေးကို ကြက်ဥကြော်လေးနဲ့ စားရတော့လည်း ပဲမှုန့်ရဲ့အရသာပေါ်ပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ စားမြိန်ပါ့။ မြေပဲကတော့ မကြွပ်ဘဲပျော့နေလေရဲ့။ တစ်ပွဲ ၁၅၀၀ တဲ့။
အခရာသွားတဲ့အချိန်က နောက်ကျတော့ တခြားဗမာမုန့်တွေတော့ ကုန်နေပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ စားချင်တာလေးတွေစားပြီး အချိုလေးနဲ့ပိတ်ဖို့ လက်ဖက်ရည်တောင်မှ ကံ့ကော်ဖြူလက်ဖက်ရည် ဆိုတာလေး မှာလိုက်တာ။ လာချပေးတော့ ချစ်စရာလေး။ ကရားလေးထဲကနို့စိမ်းခွက်၊ အကျရည်သီးသန့်ခွက်လေးနဲ့ လက်ဖက်ရည်အရသာ ဆိမ့်သက်သက်လေးကွယ်။ တစ်ခွက် ၇၀၀ လောက်နဲ့ တန်ပြီး သန့်နေတယ်ထင်တာပဲ။
အဓိကကတော့ မနက်စာရောင်းတာဆိုပေမယ့် ခုလတ်တလောကတင် နေ့လည်စာ ဗမာဟင်းတွေပါတိုးချဲ့ရောင်းနေတာ။ ကိုယ်ကလည်း ဗမာဟင်းကောင်းကောင်းဆို မြင်တာနဲ့ သွားရေကျတော့ ချဉ်ပေါင်နဲ့ပုစွန်ရောကြော်တာလေးမှာခဲ့တယ်။ တကယ့်အိမ်လက်ရာစစ်စစ် မွှေးပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အိမ်နားတောင်ပြောင်းဖွင့်စေချင်တယ်။ မကောင်းတာကတော့ ဟင်းပွဲတွေကို အဖုံးမအုပ်ထားတော့ အုပ်ထားစေချင်တယ်။
ဗမာဟင်းတွေကတော့ သူလိုကိုယ်လိုဆိုင်တွေထက် ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်ထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်လေးသန့်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတာရယ် ဝန်ထမ်းလေးတွေက သဘောကောင်းပြီး ဖော်ရွေလွန်းတာရယ်နဲ့တင် တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် သဘောတွေကျခဲ့ရတယ်။
သွားကြည့်ပါ။ စိတ်ချမ်းသာစရာ ဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ရမှာ၊ အစားအသောက်သန့်သန့်လေးစားရမှာ၊ မိသားစုအတွက်မနက်စာဆိုင်သစ်လေးဖြစ်လာမှာ၊ ကံ့ကော်ဖြူတွေတွေဝေတဲ့ အစားအသောက်မြေမှာ ကြွေသွားမှာတော့ အာမခံပါတယ်။
မနက် ၇ ကနေ ညနေ ၅ နာရီထိ ဖွင့်တာမို့ ရန်ကင်းဘောက်ထော်ဘက်ရောက်ရင် Kant Kaw Phyu Food House ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ ကြွေမိသွားမယ့် ချစ်စရာဆိုင်လေးဆိုတာ တကယ်အာမခံလိုက်ပြီနော်။
အမခေကျြတဲ့လကျရာကိုလှမျးမိစမေယျ့ ရနျကငျးက ကံ့ကျောဖွူနယျမွလေေး
ကံ့ကျောပနျးတှပှေငျ့တဲ့နယျမွတေော့မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မွနျမာ့ရိုးရာ လကျသုပျစုံလေးတှနေဲ့ ဗမာစာစဈစဈကို သနျ့ပွနျ့နအေောငျစားရမယျ့ ကံ့ကျောဖွူနယျမွလေေးဆီ ရောကျပွီးပွီလား?
“ဟိုးငယျငယျတုနျးက မနကျစာစားတဲ့ဆိုငျလေးတှရေဲ့ အငှအေ့သကျကို လှမျးလိုကျတာ…”ဆိုတဲ့သူတှေ၊ ငယျငယျတုနျးက ငယျဘဝလေးတှကေို တမျးတမိတဲ့သူတှအေတှကျ ရနျကငျးက ဆိုငျသေးသေးလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ Kant Kaw Phyu Food House လေးကို ဒီတပတျ အခရာက ကံကောငျးထောကျမပွီး ရောကျသှားပလို့ပေါ့။
ကံကောငျးတယျဆိုတာက ဒီလို။ ဆိုငျလေးက အိမျဆိုငျသေးသေးလေးကိုမှ အမှတျ (၁၂)၊ အဝရောလမျး၊ ဘောကျထျော၊ ရနျကငျးမှာဆိုတော့ လမျးထဲတျောတျောဝငျရတယျ။ ဒါပမေယျ့ အေးခမျြးတိတျဆိတျပွီး သနျ့ရှငျးနတေော့ အမောပွရေတယျ။ ခုံမွငျ့လေး ၆ခုံလောကျနဲ့ အအေးကောငျတာ၊ အသီးဖြျောရညျကောငျတာရယျ၊ မွနျမာမုနျ့နဲ့ထမငျးဟငျးကောငျတာရယျ ဖှယျဖှယျရာရာလေး။
ဆိုငျလေးက ဘာတှရေလဲမပွောခငျ စိတျခမျြးသာစရာလေးပွောပွမယျ။ သူ့ဆိုငျမှာ အခြိုမှုနျ့လုံးဝမသုံးဘဲ မွပေဲဆီစဈစဈနဲ့ သုံးတာတဲ့။ အရမျးကွှစေရာကောငျးတာက ရဝေယျသောကျစရာမလိုတာပါပဲ။ သူက Detox Water လေးခပြေးတယျ။ Jar လေးနဲ့ အဝသောကျပဲ။ ကနျြးမာရေးအတှကျတော့ Five Star ပေးလိုကျပွီ။
နနျးကွီးသုပျ၊ မုနျ့ဟငျးခါး၊ မုနျ့တီ၊ ခိုတောငျခေါကျဆှဲ၊ ကောကျညငျးပေါငျး၊ ပဲဆီထမငျး၊ အကွျောစုံနဲ့ လကျဖကျရညျ ဘာညာသောကျစရာက မနကျစာတလိုငျး။
ပွညျထမငျးသုပျ၊ မွငျးခွံထမငျးသုပျ၊ ပုနျးရညျကွီးထမငျးသုပျနဲ့ တခွားအသုပျတှေ အိမျခကျြလကျရာဟငျးတှနေဲ့ အကွျော၊ အမှ၊ ခွောကျစပျတှကေ နလေ့ညျစာတဈသှယျ ရပါတယျတဲ့ရှငျ။
မုနျ့ဟငျးခါးလေးက ငါးနံ့လေးသငျးလို့ အခြိုမှုနျ့မလိုဘဲကို ငါးရဲ့ အခြိုဓါတျလေးနဲ့ ဘဲဥဖတျလေး၊ ငှကျပြောအူလေးနဲ့ တဈပနျးကနျစီ ဖှယျဖှယျရာရာလေး။ ဗမာမုနျ့ဟငျးခါးစဈစဈ မှေးနတောမြား စားကောငျးမယျဆိုတာ အနံ့နဲ့တငျ သိနရေပွီ။ အလှတျဆို ၈၀၀ ပါ။
ပွညျထမငျးသုပျလေးကို ကွကျဥကွျောလေးနဲ့ စားရတော့လညျး ပဲမှုနျ့ရဲ့အရသာပျေါပွီး ခပျပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ စားမွိနျပါ့။ မွပေဲကတော့ မကွှပျဘဲပြော့နလေရေဲ့။ တဈပှဲ ၁၅၀၀ တဲ့။
အခရာသှားတဲ့အခြိနျက နောကျကတြော့ တခွားဗမာမုနျ့တှတေော့ ကုနျနပွေီ။ ဒါနဲ့ပဲ စားခငျြတာလေးတှစေားပွီး အခြိုလေးနဲ့ပိတျဖို့ လကျဖကျရညျတောငျမှ ကံ့ကျောဖွူလကျဖကျရညျ ဆိုတာလေး မှာလိုကျတာ။ လာခပြေးတော့ ခဈြစရာလေး။ ကရားလေးထဲကနို့စိမျးခှကျ၊ အကရြညျသီးသနျ့ခှကျလေးနဲ့ လကျဖကျရညျအရသာ ဆိမျ့သကျသကျလေးကှယျ။ တဈခှကျ ၇၀၀ လောကျနဲ့ တနျပွီး သနျ့နတေယျထငျတာပဲ။
အဓိကကတော့ မနကျစာရောငျးတာဆိုပမေယျ့ ခုလတျတလောကတငျ နလေ့ညျစာ ဗမာဟငျးတှပေါတိုးခြဲ့ရောငျးနတော။ ကိုယျကလညျး ဗမာဟငျးကောငျးကောငျးဆို မွငျတာနဲ့ သှားရကေတြော့ ခဉျြပေါငျနဲ့ပုစှနျရောကွျောတာလေးမှာခဲ့တယျ။ တကယျ့အိမျလကျရာစဈစဈ မှေးပွီး စားကောငျးလှနျးလို့ အိမျနားတောငျပွောငျးဖှငျ့စခေငျြတယျ။ မကောငျးတာကတော့ ဟငျးပှဲတှကေို အဖုံးမအုပျထားတော့ အုပျထားစခေငျြတယျ။
ဗမာဟငျးတှကေတော့ သူလိုကိုယျလိုဆိုငျတှထေကျ ဈေးနညျးနညျးကွီးတယျထငျတာပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဆိုငျလေးသနျ့ပွီး ခဈြစရာကောငျးတာရယျ ဝနျထမျးလေးတှကေ သဘောကောငျးပွီး ဖျောရှလှေနျးတာရယျနဲ့တငျ တဈထပျပွီးတဈထပျ သဘောတှကေခြဲ့ရတယျ။
သှားကွညျ့ပါ။ စိတျခမျြးသာစရာ ဆိုငျလေးမှာ ထိုငျရမှာ၊ အစားအသောကျသနျ့သနျ့လေးစားရမှာ၊ မိသားစုအတှကျမနကျစာဆိုငျသဈလေးဖွဈလာမှာ၊ ကံ့ကျောဖွူတှတှေဝေတေဲ့ အစားအသောကျမွမှော ကွှသှေားမှာတော့ အာမခံပါတယျ။
မနကျ ၇ ကနေ ညနေ ၅ နာရီထိ ဖှငျ့တာမို့ ရနျကငျးဘောကျထျောဘကျရောကျရငျ Kant Kaw Phyu Food House ဆိုတဲ့ဆိုငျလေးကတော့ ကွှမေိသှားမယျ့ ခဈြစရာဆိုငျလေးဆိုတာ တကယျအာမခံလိုကျပွီနျော။